Intuthu Ayivuli? Ukulungiswa Okungenzeka Okufanele Uzame (2020) - Ukudlala
Intuthu Ayivuli? Zama lokhu Ukulungiswa (2020)
Sonke sihlangabezane nezimo lapho iSteam ingakwazi ukuvula khona. Njengoba iSteam inenani elikhulu labasebenzisi, kwesinye isikhathi iyaphahlazeka, noma iseva ivalwe ngenhloso ukulawula umthwalo osindayo.
Ngenxa yokungavulwa kwephutha le-Steam, futhi awukwazi ukufinyelela emidlalweni yakho. Okomdlali wegeyimu, lezo yizindaba ezimbi njengoba sizithola lapho bonke abangane bakho bejabulela umdlalo ofudumele we-CSGO, futhi lapha awukwazi ngisho nokuvula iSteam yakho. Ungakhathazeki; sikusibekele. Kule ndatshana, sizobe sihamba ngezindlela ozokwazi ngazo ukulungisa leli phutha elivela njalo.
Ukufundwa okungaphakathi: 21+ Izabelo Ezingcono Kakhulu Okufanele Uzilandele
Izizathu eziphezulu zokuthi kungani i-Steam ingasebenzi:
Ukuxhumeka kwenethiwekhi:Lokhu kusobala, kepha izikhathi eziningi i-adapter yakho ye-wifi ngeke isebenze, noma ngenxa yezinkinga ezithile, awuxhumekile ku-inthanethi. I-Steam ikwenza kucace ngokukwenza ufake i-loop engapheli yesikhathi sokulayisha esidinga i-inthanethi. Qiniseka ukuthi usebenzisa i-hotspot ephathekayo noma xhuma ku-wifi ukufinyelela iSteam.
Idiski engalungile enikeziwe:Ngenkathi ufaka, uma ufaka iSteam ku-C drive (lapho kuneSystem yakho yokusebenza), uma kunesikhala esincane kamuva, kuzodala amaphutha ku-Steam. Noma izibuyekezo zesikhathi esizayo zithatha isikhala esithe xaxa, kuzodala iphutha elifanayo, futhi iSteam ngeke ivuleke. Lokhu kwenzeka ngenxa yememori encane ekhona.
Ibhodi le-VAC:Uma ukhohlise kunoma imuphi umdlalo wabadlali abaningi noma usebenzise ama-hacks, noma wenze noma yikuphi ukuziphatha okungafanele, uvinjelwa ku-Steam. Lokhu kungaba kwesikhashana noma unomphela; kuphuma konjiniyela ngemuva kokuphenya icala lakho. Ngeke sibe khona isixazululo sale nkinga.
Inkinga Yesiphakeli Se-Steam:Lokhu kujwayelekile ngemidlalo etholakala ku-inthanethi. Njengoba kunenqwaba yedatha, amaseva ayasuswa ngenhloso ukugwema ukuphahlazeka. Lapho kukhishwa izibuyekezo ezintsha, iseva yehliswa phansi ukuvimbela izimbungulu namaphutha kuskripthi. Lokhu kungaba ngesinye sezizathu esenza ukuthi i-Steam yakho ingavuli.
Imemori enganele:I-RAM iyingxenye ebalulekile yokudlala. Ngenxa yememori encane, i-Steam ngeke ikwazi ukulayisha izinhlelo zokusebenza. Kulezi zimo, kufanele okungenani ube ne-8GB ye-ddr5 RAM. Lokhu kuzophatha ngokwanele izinhlelo zokusebenza futhi kunikeze iSteam isikhala esithe xaxa sokusebenzisa kukhompyutha yakho.
Akubuyekeziwe:Uma ungasebenzisi inguqulo yakamuva yeSteam, khona-ke uSteam ngeke akwazi ukusebenza kahle futhi aphonse amaphutha. Lokhu kuyefana ngokuvuselela yonke imidlalo yakho. Qiniseka ukuthi uvuselele i-Steam yakho. Uma kungenjalo, bese ulanda inguqulo yakamuva kuwebhusayithi ngokuchofoza lapha .
Yebo, lokhu kuphetha isigaba lapho sichaza khona zonke izinhlobo zamaphutha ezingenzeka. Ungakhathazeki; esigabeni esilandelayo, sizobe sidingida ukuthi singazixazulula kanjani, ngakho-ke asifunde.
Lungisa Izinkinga Zokuvula I-Steam - Ukulungiswa Okungenzeka
Ekugcineni, ingxenye obukade uyilindile, ukuthi ungawalungisa kanjani la maphutha. Nakhu kuhamba, ngeke sikutshele eyodwa, hhayi ezimbili, kepha izindlela ezine zokulungisa la maphutha kusistimu yakho. Eyesine iyingozi impela, kepha okwamanje, kufanele uyigcine njengenketho yendawo yakho yokugcina.
Lungisa izinkinga eziphathelene nokuxhumeka kwenethiwekhi:
Hlola ukuthi ngabe uxhumekile yini kunethiwekhi.
Uma kungenjalo iya kuzilungiselelo> Inethiwekhi ne-Intanethi> Isimo. Hlola ukuthi ayikhombisi ukuthi ixhumekile noma cha.
Uma ungaxhunyiwe, iya ku-VPN> bese uqinisekisa ukuthi i-VPN icishiwe.
Bheka ukuthi kukhona yini ukubuyekeza komshayeli kwe-adapter yakho ye-wifi.
Uma zonke lezi zinyathelo zilandelwa, futhi nangemva kwesinyathelo 4, ungakwazi ukuxhuma ku-inthanethi, ungahle ucabange ukuthola i-adaptha ye-wifi entsha.
I-Steam ayivuli ngenxa ye-Firewall (kuyafana nokuthi iSteam ayisebenzi ngenxa ye-antivirus):
Iya kuzilungiselelo ezivela kubha yomsebenzi we-Windows.
Sesha ukuvikelwa kwe-Firewall neNethiwekhi.
Vala i-Firewall elawulwa yi-antivirus yakho.
Ekugcineni, Qalisa kabusha iSteam.
Vala iWindows Defender:
Inketho yokusesha ngaphandle kwebha yokusesha yeWindows.
Sesha iWindows Defender.
Bheka isimo bese usicisha uma kuvuliwe.
Qalisa kabusha umusi.
Ukufaka kabusha umusi:
Sesha i-Steam kubha yokusesha bese uzulazulela ‘Kuzinhlelo’.
Khipha iSteam kusuka kusistimu yakho.
Lapho usukhiphe iSteam kusuka kusistimu yakho. Landa umusi ngokuchofoza lapha (landa njengokulungiselela kwakho).
Vumela ukuthi ifake futhi iqalise iSteam yakho.
Qaphela:Qaphela ngenkathi ukhipha uhlelo lokusebenza. I-Steam inomkhuba omubi wokususa yonke imidlalo yakho ngohlelo lokusebenza, ngakho-ke qiniseka ukuthi uthatha izipele ezivamile ngokushayaI-Steam> Yenza isipele futhi ubuyisele imidlalo> Yenza isipele imidlalo efakiwe njengamanje> Khetha imidlalo> Khetha idivayisi yangaphandle. Ngenkathi ulungisa umdlalo, ngemuvaukwethula iSteam> ukwenza isipele nokubuyisela imidlalo> buyisela isipele sangaphambilini. Ngokulandela lezi zinyathelo, uzokwazi ukwenza isipele ngempumelelo futhi ubuyisele imidlalo yakho. Kungaba ngcono uma ukwenzile lokhu ngaphambi kokuhlangabezana nephutha ngoba ngemuva kwalokho akulona iphuzu.
Ake sithi zonke lezi zixazululo azikusizi ukuthi uqiniseke ukuthi uthinta abakwa-steam bese uzama ukucela usizo. Kungenzeka futhi ukuthi amaseva aphansi ngenxa yesizathu esithile, ngakho-ke qiniseka ukuthi usuvele ukuhlole lokho.
Njengoba ufundile kuze kube manje kunethiphu ongakulindela. Ithiphu eyimfihlo: ngemuva kokwethula umusi> I-Steam> hlola izibuyekezo zamakhasimende we-steam. Lokhu kuzohlola noma iziphi izibuyekezo, futhi kungaba yisizathu sokuthi kungani i-steam yakho ingaqali. Siyethemba ukuthi ngemuva kokufunda le ndatshana, inkinga ye-steam engasebenzi noma ukuvulwa sekuxazululiwe.
Uma ukwazile ukuxazulula amaphutha obukade ubhekene nawo ngemuva kokufunda lokhu, okuthunyelwe bese ulahla imibono nemicabango yakho esigabeni sokuphawula ngezansi.
Lungisa ikhodi yephutha leRoblox 267
Lungisa Iphutha Lesipiliyoni seGeForce 0x0003
Imidlalo engu-15 ehamba phambili efana neRoblox (2020)
Ungawabuka Kanjani Amavidiyo we-YouTube Avinjiwe?